‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा अन्य महानगरलाई उछिन्छौं’
साउन २३, २०७४ सोमवार ११:४४:०० प्रकाशित
प्राचीन सम्पदाका कारण ललितपुर महानगरपालिकाले पर्यटकीय सहरको परिचय बनाएको छ। उपमहानगरबाट महानगर बनेर दुई दशकपछि जनप्रतिनिधि आएसँगै नगरवासीले यो पर्यटकीय नगरबाट विविध कुरासँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पनि अपेक्षा गरेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा महानगरको अहिलेको अवस्था र भावी योजनाबारे मेयर चिरिबाबु महर्जनसँग स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका लागि दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीः
मेयर भएर आएपछि महानगरमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के–कस्ता समस्या पाउनुभयो?
म आएको बल्ल दुई महिना पुगेको छ। यस अवधिमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यहाँ त्यति नराम्रो अवस्था देखेको छैन। केही दिनअघि वडा नम्बर १५ मा हैजाका दुई जना बिरामी भेटिएका थिए। उनीहरु निको भइसकेका छन्। यहाँ सरुवा रोगहरुको अवस्था मैले अनुभव गरेको छैन। यसले महानगरका बासिन्दाको खानपान स्वस्थकर नै भएको देखाउँछ।
अहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा भयावह समस्या केही पनि देखिएको छैन। समस्याको पहिचान भएपछि त्यसको समाधानका लागि हामी त्यही अनुरुपमा योजनाहरु निर्माण गर्नेछौं।
समग्रमा ललितपुर महानगरमा स्वास्थ्य सेवा कत्तिको प्रभावकारी भएको अनुभव गर्नुभएको छ?
ललितपुर महानगर २९ वडामा फैलिएको छ। यहाँका हरेक वडामा सुविधायुक्त स्वाथ्य चौकी छन्। त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु नियमित रुपमा आएर उपचार गर्ने गरेको मैले पाएँ। केही निजी र सरकारी स्तरका अत्याधुनिक अस्पतालहरु पनि महानगरमा छन्। प्रत्येक वडा र टोलमा औषधी पसल रहेका छन्। सबैतिर सुविधा पुगेरै होला, मलाई यस विषयमा धेरै गुनासो आएका छैनन्।
उपमहानगरबाट महानगर बनेसँग नगरवासीहरुले अन्य क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवा–सुविधा पनि उच्चस्तरको हुने अपेक्षा राखेका छन्। त्यो अपेक्षा सम्बोधन गर्ने तपाईंसँग के–कस्ता योजना छन्?
ललितपुर महानगरमा अहिले पनि यहाँका अस्पताल र सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्रले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको मैले बुझेको छु। हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुमा यही गुणस्तर कायम राख्दै अन्य सुविधा थप्न सकेमा केही चिन्ता लिनुपर्दैन भन्ने लाग्छ। तपाईंले योजनाको कुरा गर्नुभयो, तर हामीले अहिले नै यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्माण गरेका छैनौं। पहिले त स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सरकारबाट आवश्यक ऐन आउनुपर्‍यो। ऐन जारी भएपछि त्यसको आधारमा हामी नीति र योजना बनाउने सोचमा छौं।
जनतालाई स्वाथ्य सेवा दिने कुरामा सरकारले बनाउने ऐनले बाधा गर्ला र?
बाधा त नहोला। तर, हामीले आफ्नै सुरमा निर्माण गरेको ऐन उक्त ऐनसँग बाझिए समस्या हुन सक्छ। त्यो स्थितिमा पछि फेरि अर्को ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारको ऐन कुरेर बसेका हौं। उक्त ऐनले कुन निकायलाई कसरी समायोजन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन तहका कर्मचारी खटाउने अधिकार दिने भएकाले त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। ऐन आउनासाथ अरु नीतिसँगै स्वास्थ्य नीति पनि बनाएर हामी छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ।
भर्खरै महानगरको नगर परिषद् सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेटमा कति रकम विनियोजना गर्नुभएको छ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले यति नै रकम भनेर छुट्याएका छैनौं। स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको निर्देशिका अनुसार नै रकम बाँडफाँट भएको छ। अन्य क्षेत्रलाई भन्दा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता नै दिएका छौं। २९ वडाका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य कार्यका लागि हामीले प्राथमिकता र आवश्यकता हेरेर रकम विनियोजन गरेका छौँ।
तपाईंको महानगरभित्र रहेका सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्रहरुको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा के योजना छ? स्वास्थ्यकर्मीको हितका लागि तथा स्वयंसेविकालाई अझ सेवा दिन अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरु पनि प्राथमिकतामा छन् कि?
सबै जनतालाई स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने माध्यम भनेको वडामा रहेका सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र नै हुन्। त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने कुरा मेरो सधैं प्राथमिकता रहन्छ। त्यही अनुसारको बजेट समेत नगर परिषद्मा हामीले पारेका छौं। आगामी दिनहरुमा पनि महानगरबाट निर्माण हुने योजनाहरुमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने, पोषण तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने विषयहरुलाई मैले समेट्नेछु। स्वयंसेविकाहरुको सेवा–सुविधा वृद्धि गरी उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा प्रेरित गर्ने हाम्रो सोच पक्कै पनि छ। नगर सभामा पनि यो कुरा उल्लेख भएको छ।
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएकोले स्वास्थ्य त अन्य क्षेत्रभन्दा निकै संवेदनशील मानिन्छ। त्यसलाई अलग्गै विभाग बनाएर हेर्ने महानगरको योजना छ कि छैन?
हामी यसलाई अलग्गै विभाग बनाउँछौं। महानगर र नगरभित्र विषयगत विभाग आउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ। तपाईंले भने जस्तै स्वाथ्य सबै जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने भएकाले हामीले विशेष रुपमा हेर्नैपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताका धेरै गुनासो र चासो हुने भएकाले हामी जनप्रतिनिधिले यसतर्फ ध्यान दिनेछौं। त्यही कुरालाई ख्यालमा राखी हामीले नगर परिषद्बाट विशेष बजेट पारेर प्राथमिकता निर्धारण गरेका पनि छौं।
खोपहरुको अधिकार, मातृशिशु स्वास्थ्य, सुत्केरी, पिछडिएका वर्गहरु र अपांगहरुका लागि के कार्यक्रम छ?
निश्चित रुपमा हामीले यी सबैका लागि काम गर्नैपर्छ। यसका लागि हामी कानून नै निर्माण गर्ने सोचाइमा छौं। फेरि पनि कुरा के हो भने, सरकारले लागू गर्नुपर्ने ऐन नआएर रोकिएको छ। त्यो पारित भएर आउने बित्तिकै हामी अपांग, पिछडिएका वर्ग, बालबालिका र विपन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कानून बनाएर लागू गर्नेछौं।
संविधानमा स्वस्थ रहन पाउने नागरिकको अधिकार भनेर मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ?
संविधानको विविध मौलिक हकमध्ये स्वास्थ्य पनि एक हो। त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। ललितपुर महानगरले पनि उक्त दायित्वबाट पछाडि हट्न मिल्दैन र हट्दैन। हाम्रो महानगरले संविधानका अन्य मौलिक हकसँगै स्वस्थ रहन पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न लगानी गर्नेछ। आफूलाई प्राप्त बजेटमध्ये केही अंश यसका लागि हामी लगानी गर्नेछौं। महानगरभित्र रहेका स्वाथ्य चौकी, अस्पताल र अन्य स्वाथ्य केन्द्रहरुलाई हामी अलग्गै संयन्त्र निर्माण गरी नियमित अनुगमन गर्ने विचारमा छौ। गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नेलाई हौसला प्रदान गर्नेछौं भने नगर्नेलाई कारबाही पनि गर्नेछौं।
तपाईंको कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ललितपुर महानगरको अभियान के हो?
अबको पाँच वर्षमा ‘स्वस्थ महानगर, स्वथ्य ललितपुर र स्वस्थ नागरिक’ भन्ने नारासहित म काम गर्नेछु। प्रथम नगर सभामा पनि मैले यही कुरा गरेको थिएँ। सबै नागरिकलाई सचेत बनाई स्वस्थ बनाउने मेरो अभियान सुरु भइसकेको छ। अबको केही समयमै तपाईंले यो कुरा महसुस गर्न पाउनुहुनेछ। ललितपुरका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधी, विशेषज्ञ डाक्टर व्यवस्था गरी विना झन्झट नागरिकको उपचार भएको हेर्न पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्य सेवातर्फ प्रगतिका सूचकहरुमा अन्य महानगरभन्दा हामी अगाडि हुनेछौं।
तपाईं आफू पनि निकै स्वस्थ देखिनुहुन्छ, आफूलाई स्वस्थ राख्न के कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुहुन्छ?
म नियमित व्यायाम गर्छु। बिहान दौडिने र अन्य अभ्यास गर्छु। धूमपान र मद्यपान गर्दिनँ। यसरी स्वास्थ्यलाई बिगार गर्ने चिजबाट टाढै बसेर सक्रिय दिनचर्या भएकैले म स्वस्थ देखिएको हुँ। तर, अहिले म व्यस्त भएकाले नियमित रुपमा व्यायाम गर्न पाएको छैन। आहारविहार र जीवनशैलीको नियमित रुटिन बिग्रिएकोले अस्वस्थ भइने हो कि भन्ने डर लाग्न थालिसक्यो।
स्वस्थ रहन महानगरवासीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?
सबै जनतालाई स्वस्थकर खाना खान र नियमित व्यायाम गर्न आग्रह गर्छु। खानपान र जीवनशैली नै स्वास्थ्यको आधार हो। मदिरा र धूमपानबाट पनि टाढै बसौं। म त के भन्छु भने, सकेसम्म माछा–मासु पनि नखाएको राम्रो हो। हरियो सागपात र फलफूल खान सुझाव दिन्छु। हुन त मैले भनिरहन जरुरी नहोला, आजको सूचना–प्रविधिको जमानामा धेरै कुरा जानेर नगरवासीहरु आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग हुनुहुन्छ।
म अब नीति निर्माण गर्ने तहमा भएकाले स्वस्थ महानगर र महानगरवासी बनाउने योजनातिर लाग्नेछु। त्यसमा सबैको साथ र सहयोग पाउँछु भन्ने कुरामा आशा गरेको छु।